अन्तरर्वार्ता Archives - itaharinews
वाम गठबन्धनको तर्फ बाट सुनसरी क्षेत्र नं. २ को उम्मेदवार डम्मर सुवेदी –हिमाल सँग पत्रकार अर्जुन पौडेलको कुराकानी १ चुनाव आयो उम्मेदवार बन्नुभएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज ?  हिजो वाम गठबन्धनको तर्फ बाट सुनसरी क्षेत्र नं। २ बाट मेरो उम्मेदवारी दर्ता भए पछि दुवै पार्टीका नेता ,कार्यकर्ता,शुभचिन्तक र जनता सँगको भेटघाटमा व्यस्त छु ।साथै बधाई र शुभकामना लिनेदिने काम पनि भइरहेको छ । २ सुनसरी...
प्रदेश नम्वर एकका चर्चित युवा नेता हेमकर्ण पौडेल सुनसरी क्षेत्रनम्वर २ को क बाट प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लड्दै छन । प्रदेश नम्वर एकको राजधानी इटहरीलाई बनाउँन लामो समय देखि वहष र पहल गदै आएका पौडेल यस क्षेत्रका चर्चित र प्रभावशाली युवा नेता हुन । बि।स २०३५ साल साउन ५ गते झापा कोरोबारीमा जन्मेका हेमकर्ण पौडेल चर्चित युवा राजनीतिज्ञ हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला ११ बर्से पौडेल पञ्चायतरिुद्ध सडकमा...
बाबुराम भट्टराई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष र नेपालको ३५ औ प्रधानमन्त्री हुन् । संविधान सभामा सबैभन्दा बढ्ता मत र मतअन्तरले जित्ने माओवादी सभासद् डा।बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसका प्रत्यासी आफ्नै मामा पर्ने चन्द्रप्रसाद न्यौपानेलाई ४० हजारको अन्तरले हराएका थिए । उनले द नेचर अफ अण्डरडेभलपमेन्ट एण्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अर्थमन्...
पहिलो संविधानसभामा मनोनीत सभासद बनेकी एमाले नेतृ भगवती चौधरी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री भएकी थिईन्। २०७० को निर्वाचनमा सुनसरी–३ मा एमाले उम्मेदवार रहेकी उनी तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारसँग पराजित भइन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित गरेका गच्छदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमालेले यस पटकपनि उनैलाई सुनसरी–३ मा प्रत्यासी बनाएको छ। यसै विषयमा चौधरीसग गरिएको कुरका...
नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति यात्रा सुरु गरेको राजिव कोइराला विभिन्न संघर्ष पछी नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । उनी नेपाली काङ्ग्रेसमा लगनशील, सहनशिल, मेहनती र जुझारु युवाका रुपमा सुनसरी काङ्ग्रेसको सभापती भै हाल सम्म सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई हाक्ने क्षमतावान, साहसी र निडर युवा हुन् । अगामी महिना हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा ९ख० बाट उम...
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरणकै प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको छ । कतिपयले कम्युनिष्ट शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिदा देशका लागि फाइदा हुन्छ भनेका छन् भने कतिपयले सत्तामा पुग्नका लागि मात्रै गरिएको मिलन भनेका छन् । नेकपा माओभित्रका केही नेताहरुले चाँही आफ्नो पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएको भन्दै तिब्र असन्तुष्टी जनाएका छन् । असन्तुष्टी जनाउन एक नेता हुन्, गोपाल किँरात...
प्रदेश नम्बर २ को चुनावको नतिजाले संघिय समाजवादी फोरमलाई त्यस प्रदेशमा दोस्रो ठूलो शक्तिको रुपमा उभ्याएको छ । प्रदेश नम्बर २ को चुनावी समिक्षा, आगामी संसद र प्रदेशको चुनाव लगायतका विषयमा फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीमा महन्थ ठाकुर नेतृत्व राजपालाई उपेन्द्र यादवले कडा झड्का दिएकाछन् । कुराकानीको ...
ओली सरकारले बनाएको भनिएको ६५ हजार घर अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ; गोविन्द पोखरेल !
भूकम्प गएको २६ महिना वितिसक्दा समेत पीडितले उचित राहत पाउन सकेका छैन । पुनः निर्माणकै लागि भनेर गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण पनि राजनीतिक दलको हस्तक्षेपको सिकार हुने गरेको छ । कतिपय विषयमा नीतिगत समस्या पनि हुने गरेको छ । यस्तै बाहानामा प्राधिकरणले काम गर्न सकेको छैन र त्यसको प्रत्यक्ष असर भूकम्पका कारण घरबार विहिन भएका पीडितमा परेको छ । यिनै विषयवस्तुमा रहेर प्राधिकरणका प...
पाच वर्षमा खनारको मुहार फेर्छु ; दाहाल
तपाइको उम्मेदवारी के कालागी ? दुइ दशक पछि भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा मैले पनि वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको छु । मेरो उम्मेदवारी खनारको विकास र समाजिक न्यायकालागी हो । मैले खनारको समस्या देखेको छु भोगेको छु ति सवै निर्मुल पार्ने मेरो एक मात्र लक्षय हो । के हो खनारको मुल समस्या ? प्रमुखमा त विकास नै हो । राजमार्गको दाया वाया फैलिएको भएपनी यो स्थान विकासको दृष्टिकोणले निकै छाडि परेको छ । यहाक...
हामी बिजयी नजिक छौ ; गौतम
इटहरी उपमहानगरपालीका को लागी कस्तो नेतृत्व आउने हो भन्ने बिषयमा सबैतिर चर्चा र बहस सुरु भएको छ । त्यसमा पनी इटहरीको लागी सम्पुर्ण प्रतिनिधित्वको रुपमा वडा नं ६ लाइ मान्ने गरीन्छ । जुन पुर्वमा बुढी खोला देखी पश्चिममा कलंकी चोक सम्मको मुख्य बजार क्षेत्र भित्र पर्छ । जसलाइ ट्रान्जिट र ट्रेडको केन्द्र पनी मानीन्छ । धेरै जनधनत्व हुने र आवत जावतको रुपमा इटहरी सहरको खास मुहार पनी हो । हरेक हिसाबमा वडा नं...